Fikambanan'ny dia amerikanina: tsy maintsy mitohy ny resaka momba ny fanampiana COVID-19
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fikambanan'ny dia amerikanina: tsy maintsy mitohy ny resaka momba ny fanampiana COVID-19
Ny filoha lefitry ny raharaham-bahiny amerikanina dia ny filoha lefitry ny raharaham-bahiny ary ny politika Tori Emerson Barnes dia namoaka ity fanambarana manaraka ity momba ny tatitra fa mampiato ny fifampiraharahana momba ny dingana manaraka amin'ny fanampiana ara-dalàna mifandraika amin'ny aretina ny pandemioma:
“Zava-dehibe ny hanohizan'ny mpitondra any Washington lahateny ary handrosoana amin'ny fanalefahana ara-toekarena tena ilaina. Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia 38% n'ny asa amerikana very rehetra hatreto, ary ireo orinasan-dia - 83% amin'ireo dia orinasa madinidinika - dia mbola marefo amin'ny fiatraikany ara-toekarena amin'ny krizy ara-pahasalamana.
"Ny fihodinana voalohany teo amin'ny fanamaivanana ny lalàna dia fanombohana lehibe, saingy namela sehatra amerikana goavambe izy ireo niharan'ny fihenan'ny toe-karena ratsy indrindra: ny fivezivezena, izay nanohana ny asa ho an'ny amerikana iray amin'ny 10 tamin'ny taon-dasa, nefa izao dia nahita mihoatra ny antsasaky ny Etazonia maty ny asa nanomboka ny volana martsa.
"Ny programa momba ny fiarovana ny Paycheck dia mila itarina eo noho eo, ary hivelatra ny fahazoana azy, raha tsy izany dia asa fivelomana an-tapitrisany maro no mety hanjavona maharitra ary ny fanarenana an'i Etazonia dia hihamalemy alohan'ny hanombohany. Ny tsy famindrana fonosana iray izay hameno ny banga sasany amin'ireo vonjy taitra teo aloha dia ho vokatra mampalahelo ho an'ny Amerikanina isaky ny zana-tohatra tohatra ara-toekarena, ary manantena izahay fa afaka manome soso-kevitra hanohy ireo fifampiraharahana ireo ny mpitarika amin'ity herinandro ity. ”
Filoha Trump ny sabotsy dia nanao sonia ny baiko hanitarana ny tombontsoa tsy an'asa, hampiato ny hetra amin'ny karama ary hanolotra fandroahana federaly sy fanampiana ny indram-bolan'ny mpianatra, handray ny hetsika tsy mitongilana izay eo amin'ny sehatry ny lalàna mangozohozo eo amin'ny fifampiraharahana momba ny vonjy taitra fahadimy momba ny fanampiana coronavirus ao amin'ny kaongresy.
Ny filoha dia nanambara ny fihetsiky ny mpanatanteraka avy amin'ny kliobany manokana any Bedminster, NJ, izay nandaniany ny faran'ny herinandro taorian'ny tsy nahavitan'ny mpanao lalàna tao Capitol Hill nifanaraka tamin'ny mpirakidraharaha White House.
Tsy nanatrika ara-batana ireo filoham-pirenena nandritra ny herinandro vitsivitsy ny filoha fa nilaza fa nahazo fanavaozam-baovao matetika avy amin'ireo mpiasa ao aminy.
ne memo dia manitatra ireo tombony azo amin'ny tsy fananan'asa nohatsaraina izay tapitra tapa-bolana lasa izay ary nanakiana ny Amerikanina an-tapitrisany tsy an'asa noho ny areti-mandringana. Ny tombony dia hahena amin'ny $ 600 ka hatramin'ny $ 400 isan-kerinandro, miaraka amin'ny fanjakana takiana mba handoavana ny 25 isan-jaton'ny vidiny, hoy i Trump.
Ny iray amin'ireo baiko dia mibaiko ny Departemantan'ny Tahirimbolam-panjakana hamela ny mpampiasa hanemotra ny fandoavan-ketra amin'ny karaman'ny mpiambina sosialy amin'ny faran'ny taona 2020 ho an'ny Amerikanina izay mahazo latsaky ny $ 100,000 isan-taona. Ny lahatsoratra ao amin'ny didim-panjakana dia milaza fa hanomboka ny 1 septambra ny vanim-potoana fampihemorana natao, saingy nanolo-kevitra i Trump fa mety hiverina amin'ny Aogositra 1. Nilaza koa i Trump fa manantena ny hamela ny hetra amin'ny karama ampaham-bola izy ary hampihena ny hetra amin'ny karama maharitra raha voafidy indray izy amin'ny volana novambra.
"Raha mandresy aho dia mety hitatra sy tapitra," hoy i Trump. “Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hohalavaiko mihoatra ny faran'ny taona izany ary hofoanako ny hetra.”
Baiko roa fanampiny manemotra ny fandoavan-trosan'ny mpianatra mandritra ny faran'ny taona ary mikendry ny hampihena ny fandroahana trano fonenana federaly, na dia tsy mampiato ny fandroahana azy ireo farany aza.
"Amin'ny alàlan'ireto hetsika efatra ireto dia hanome fanampiana lehibe ho an'ireo Amerikanina sahirana mandritra ny fotoan-tsarotra ity ny fitondrako," hoy i Trump, namaky tamin'ny fanamarihana nomaniny.
Nametra-panontaniana ny manam-pahaizana ny fahefan'i Trump hiditra an-tsehatra amin'ny tombotsoan'ny tsy fananan'asa sy ny haba amin'ny karama, ary mety hiatrika fanamby ara-dalàna ny fihetsiny amin'ny sabotsy. Saingy i Trump dia nanala ireo fanontaniana momba ny maha ara-dalàna ireo baiko tamin'ny zoma lasa teo.